LEMAK’ANTANANARIVO: Ritra avokoa ireo renirano teloLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarMALAGASY PEJY MALAGASYLEMAK’ANTANANARIVO: Ritra avokoa ireo renirano telo	LEMAK’ANTANANARIVO: Ritra avokoa ireo renirano telo	10/01/2017	Rédigé par:	Prisca RANJALAHY
Laisser un commentaire	Categorie:	MALAGASY, PEJY MALAGASY	Hyperlien
Prisca RANJALAHY Ikopa, Imamba ary Sisaony. Nanamarina Rateloson Phillipe, tale jeneralin’ny Antokon-draharaha misahana ny fiarovana ny lemak’Antananarivo amin’ny tondra-drano (Apipa), omaly, fa efa ranom-potaka sisa no hita eny amin’ireo renirano telo hiantsorohany. Ny tsy fisian’ny rotsak’orana no nolazainy fa isan’ireo olana lehibe nahatonga izany.
“Imamba aza efa herinandro izay no zara raha misy rano mikoriana. Ny mahakasika an’Ikopa sy Sisaony indray dia nanomboka tamin’ny faran’ny herinandro teo no tsikaritra ho miiba ny haavon’ny rano”, hoy Rateloson Phillipe.
Mitaraina noho izany ny ankamaroan’ireo mpamboly vary eto amin’ny lemak’Antananarivo manoloana ity tsy fisian-drano ity. Voalaza mantsy fa mijanona ny asa fanetsana eny amin’ireo faritra sasany mandra-pisian’ny rano, raha tsy hilaza afa-tsy eny amin’ireo faritra manamorona an’Ikopa.
“Tanimbary manodidina ny 2.000 hektara noho izany no mihantona fotsiny noho ny fahamainan’ny tany, kanefa efa hanetsa izahay raha ny tokony ho izy. Ambohitrimanjaka, Ambohidrapeto, Fiombonana ary Bemasoandro no isan’ireo voakasik’izany mivantana”, hoy Randriamalala Philibert, tompona tanimbary monina eny Ambohidrapeto.
Etsy andaniny anefa, nanazava ny tale jeneraly avy eo anivon’ny Apipa fa tsy isan’ireo faritra hiantsorohan’izy ireo ny ankamaroan’ireo tanimbary tsy tra-drano eto Antananarivo. Nanampy aza Rateloson Phillipe fa efa tapitra tamin’ny herinandro teo ny fampidiran-drano tamin’ireo tanimbary mila rano eto Antananarivo ary efa vita avokoa ny fanetsan’ireo mpamboly vary.
Partager la publication "LEMAK’ANTANANARIVO: Ritra avokoa ireo renirano telo"